Goodigii Caseeyaha! W/Q Hussein Salad | RBC Radio
Goodigii Caseeyaha! W/Q Hussein Salad
Hadday sheeko baahdoo dhegta kaaga biirtoo, boholyow ku gelisoo
boga kaaga maqantahay, maqal kuma bogsiiyee waxa laysku baantaa aragtida bidhaanta.
Adigoon cirka u bixin ama boodin leexada ama badaha waaweyn, nafta aan ku biimayn
u talaabin Paris, Berlin adoon tegin ama Bon ka sheekayn, barashada dhulkaagaa horta laga bogtaayoo beryo laysku howlaa ( Hadrawi)
Waa kaftan laysku daadsaday oo inta meesha fadhidaa qayb ka tahay , jirtoo aysan is aqoon.
Waa dabeecad malaha u gaara dalka hooyo oo dadku adoo meel keli fadhiya inay kula qabsadaan sheka dheerna idin dhex marto waa dabiici. La yaab bay in badan dadka aan taa ogayn ku noqotaa. Ana markii hore qaabadaasaan ahaa. Oo in badan baan qoonsday, weliba anoo ku dhashay kuna barbaaray dhulka hooyo.
Waa markii iigu horaysay oo aan magaalada Gaalkacyo joogo muddo ka badan afar maalmood. Waxaan fursad u helay inaan wax badan ka barto dhaqanka gaarka ah ee dhulka hooyo.
Galab casara oo neecaw qabow dhacayso, wallow ay abaaro ba’an geyiga soomaliya oo dhan ku habsadeen, ayaan dibada hotel Aaran ee Galkacyo kursi Caag ah oo midab cagaaran leh hotelka hortiisa ku soo fariistay. Qaxwe Soomali sinjibiil leh sonkorna aan lahayn ayaan dalbaday, si aan uga fogaado shaaha aad u macaan ee inta badan laga cabo magaaladda.
Nin aanan garanyan ayaa inta isna kursi, kayga la mida , soo qaatay oo agatayda soo fariistay miiskii yaraa ee shaaha aan u diyaarsaday telfonkiisa saartay iyo weliba fure uu watay. imana weydiisan inuu ila fariisto ama miiska ila qaybsado. Miisku waa mid ku filan in hal qof wax saarto markaad eegto intuu le’egyahay.
Dib baan uga durkay meeshaydii anoo dareemay in la isoo ciriiryay oo yara dhibsaday sida aadka ah ee meeshayda la iila soo fariistay qofka aanan aqoona iigu soo dhawaaday.
Intii aanan dhamayn is kuusidii aan durkayay, ayaa waxaa biloowday muran u dhexeeya caseeye iyo nin uu u shaqeynayay oo uu kabaha u qurxinayay.
Caseeyuhu waa will yar oo aan da’adiisa ku qiyaasay 9-11 jir.
Ninka kalena waa wiil dhalinyaro ah oo ladnaani ka muuqato. D’a ahaana aan ku qiyaasay 19-21 inta u dhaxaysa. Waxaan is iri gurigoodii buu ka soo kacay si uu ugu soo shah, sheeko, iyo baashaal tago maqaaxiyaha magaalada.
Intiii Shaaha loogu maqnaa ayuu wiilku inta kabihii bixiyay, labadiiba u dhiibay wiil caseeye ah oo halkaa quud maalmeeldka ka xoogsada.
Waxaan xusuustay tuducdii gabaygii Ismacill mire ee “ … Isma oga Smith iyo ninkii ayra soofsaday e …”.
Waxaan ku soo baraarugay, telefonka ayaan hoos ugu jeedaye, “ Wallahi Xoogaan kaagaa qaadaa “ oo yarkii caseeyaha ugu hanjabayo wiilkii uu u shaqeeyay. Iyo yarkii oo inta yara qoslay dhayalsadayna handadaada yarka da’ ahaan, iyo tabar ahaanba aad uga yar ee u hanjabaya. Doodii baa xiiso yeelatay oo dad badatay.
Ninkii agatayda fadhiyay ayaa, iyadoo aan loo dirsan, waa siday ila tahaye, ku yiri war ninka wixiisa sii waa nin yare.
“Adeer waan siinayaa ee ha nadiifiyo kabaha” buu ku dooday. Caseeyihii ayaa inta hadalka ku soo noqday u digay inuu nadiifiyay kabaha haddana la gaaray lacag bixintii. Hase yeeshee intuu kabihii qaaday ayuu ku celiyay mar kale oo yiri. “ Lawaantan jeer maan dhaqaa kawahaada. Shaambada maa iga dhameehe “ Qosol baa dadkii intii dooda la socotay ku dhufteen.
Wiilkii markii mar kale kabihiisii loo soo celiyay ayuu inta gashaday lacagtii bixiyay.
Aad baan ula dhacay, kana mabsuuday kalsoonida iyo dhiiranaanta willka yar ku jirta.
Ninkii khasabka igula degay, ayaan ku iri yarku muxuu samayn haddii ninkaan ka weyn lacagta u diido meesha Polis iyo cid uu u dacwoodo ma lehee? Wuxuu yiri :” Wuxuu ogyahay inta meesha fadhida hadduu qayliyo inay isku mar istaagayaan oo ay lacagtiisa ka siinayaan” Kan weynina xasarad intaa le’eg ma rabo inuu u bareero.
Yaasalaam! Caddaalad iyo aabi nacayb ayaan u dareemay inay tani la meel tahay.
Caddaladdu waa dareen fog oo Eebahay insaanka ku beeray. Waa “Ilhaam” Rabaani ah oo lagu dhasho. Iskuul loogama soo baxo. Waa “Fidra”. Ma jiro qof dubaakhiisa hoose dulmiga ka jecel, jirtoo in badan aan dulmi sameeyno, misana ma moogana qofka falay in ficilkaasu fal shaydaan yahay. Caddaladdu waa lidka dulmiga, aabiga, asraarka iyo abaal ka dhaca.
Laakin, haddii cadaadlad intaa le’eg ka jirto Gaalkacyo oo caseeyuhu cadkiisa aanu cudud ka weyn uga tegayn maxaa colaada keenay aan marna dhamaan?
Tani bixiso weeyee, malaha is dhex daadsanaan iyo kala dambyn la’aan? In dooda iyo hadalka sida caanaha loo wadaago garta iyo wax dad u gaar ahna nin walba qareen ka noqdo, weliba ku dagaalamo. Ayaan u fasirtay aniga malahayga.
Malaha sababaha Gaalkacyo uga duwanthay dalka intiisa kale ayaa ah nin walba inuu amiir yahay oo gar leeyahay oo aan la kala dambayn.
Goodiga caseeyuhuna wuxuu tusayaa hab dhaqan gaara oo ka jira Gobolka mudug, intaan angu arkay. Waase dood furan oo aan dhex dhigayo dadka ee maxay kula tahay?